Fiomanana fihinam-bena ho an'ny ririnina
Ny fiomanana ny fihinanan-kena amin'ny ririnina dia tsy manomboka amin'ny fararano, fa amin'ny fahavaratra. Amin'ny herinandro farany amin'ny volana Aogositra, mila mihinana henom-boasary miaraka amin'ireo diloilo potassium sy phosphorus ianao, izay hanomana ny fototry ny zavamaniry ho an'ny ririnina sy ny vanim-potoanan'ny zavamaniry ho avy. Ny sakafo farany dia atao alohan'ny hatsiaka. Asa hafa miandry antsika mandritra ny fiomanana amin'ny ririnina amin'ny ririnina - dia hitantsika etsy ambany.
Famokarana kiraro homem-boninahitra mandritra ny ririnina
Afaka manomboka ny fanangonam-bokatra ny rambony aorian'ny fambolena farany, rehefa mifarana ny vanim-potoana mivaingana. Ilaina ny mandingana ny jiro rehetra nokarakaraina tamin'ity taona ity. Izany dia hamonjy ilay orinasa amin'ny fitaovana tsy ilaina amin'ny angovo, mitarika azy ireo hametraka ny fijinjana amin'ny ho avy amin'ny sampana matevina. Ankoatra izany, amin'ny fahavokarana amin'ny fahavaratra, dia esorintsika daholo ny lelavavin'ny tavy sy matevina, izay mamela ny mahery sy marefo indrindra.
Ny fialofana fofomamy ho an'ny ririnina dia manomboka amin'ny fiakanjoany sy ny mulching. Mba hitazonana ny fahamendrehana eo amin'ny fakan'ny rongony dia ilainy ny mitahiry azy mandritra ny taona. Ny fitaovana famonoana dia azo atao toy ny tavy, mololo, ravina prelaya. Ny tsiranoka matevina sy ny voany dia tsy mety amin'ny fihinanan-kena, satria tsy tiana ny tontolo iainana.
Ny fototarazon'ny lohataona dia tena zava-dehibe, satria mandritra ny hatsiaka tampoka amin'ny tsy fisian'ny lanezy, dia ity ihany no afaka manangom-bokatra avy amin'ny orambe. Ny lafy tsara indrindra amin'ny mulch dia 5 ka hatramin'ny 10 santimetatra. Ny loko kely dia tsy hiaro amin'ny hatsiaka, fa ny lehibe kokoa dia hiteraka fisakafoanana, poizina ary aretina.
Alohan'ny mulching dia ilaina ny manondraka tsara ny tany, ka tsy mandeha amin'ny ririnina ny fototarazo.
Ahoana ny fomba hampifangaroan-java-bolo amin'ny ririnina?
Rehefa tapitra ny dingan'ny ravina, dia tonga ny fotoana fieboanana sy ny fametahana karazam-bozaka. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampiasa fomba tsotra amin'ny endrik'olona vitsivitsy ao anaty tetezana hazo na metaly eo anelanelan'ity tariby ity.
Raha mandona ny ririnina, dia tsy maintsy mandalo 20 cm ny tany amin'ny tady. Noho izany ireo sampan-kazo fihinam-boa dia hiantsoroka haingana ny lanezy ary tsy manam-potoana hisafotofotoana. Mba hamehezana azy dia ilaina amin'ny fomba arc, toy ny mifamatotra amin'ny kofehy miloko na loko mafy.
Zava-dehibe ny mandefitra ny fihinanan-kena amin'ny vanim-potoana, raha mbola ampy ny sampany. Raha mihamafy izany ianao, dia lasa maloto izy ireo ary lasa mora vaky, ka mety hanimba azy ireo ianao mandritra ny dingam-pandehanao.
Toeram-pialantsasatra ho an'ny ririnina
Amin'ireo fanontaniana rehetra momba ny fomba fihinànana ny fihinanan-kena amin'ny ririnina, dia ny fanontaniana ihany amin'ny sisa tavela ihany no mijanona. Amin'ny ankapobeny, ny filàn'ny fiarovana ny kirihitra dia tsy manan-danja afa-tsy raha tsy mipoaka ny ririnina any amin'ny faritra misy anao. Ary raha ampy ny ranomandry, dia ho ampy ny akora sy ny lanezy. Amin'ny toerana farany, afaka mampiditra ranomandry any amin'ireo kirihitra foana ianao raha toa ka tsy ampy ho anao ny loko.
Raha miaina any amin'ny toerana izay misy ranomandry kely amin'ny ririnina, ary ny ririnina dia miaraka amin'ny ranomandry sy ny rivotra, tsara kokoa ny manorina manodidina ilay toeram-pialofana.
Manaova tsara kokoa amin'ny fitaovana tsy misy lamba toy ny spandbond na lutrasil. Mamela ny rivotra izy ireo ary mamela ny mofomamy "hifoka rivotra", afa-tsy ny fanindronana.
Rehefa atsipinao eny amin'ny tany ny sampana ary apetaho eo amin'ny tady, dia asio marika maromaro mba handrakofana ny lohanao ary hamaha izany. Azonao atao ny manety azy na ny prikopat amin'ny lafiny roa.
Safidy iray hafa amin'ny fiarovana amin'ny ala maitso avy amin'ny rivotra sy ny ririnina tsy misy lanezy dia ny fananganana rafitra iray avy amin'ny takelaka vita amin'ny polycarbonate. Izy ireo dia napetraka teo an-tampon'ireo fombafomba vita tamin'ny karazana bakteria arovana.
Amin'ny lohataona dia zava-dehibe avokoa ny trano fialan-tsasatra amin'ny fotoana rehetra mba hanesorana sy hamehy ny henom-boasary amin'ny trellis. Tokony hesorina ao anaty dingana ny fonony: alaivo aloha ny fitaovam-pitaovana, ary asio ireo sampana ka hatramin'ny trelise ambony. Ny tsara indrindra hanaovana izany hatramin'ny tapaky ny Aprily.
Portulac - fambolena sy fiahiana
Inona no voninkazo nambolena ho an'ny ririnina?
Ny fanimbana akanjo ary ny fifehezany
Karakarao ny zavamaniry any anaty ririnina amin'ny ririnina
Irises - fiomanana amin'ny ririnina
Tranoben'ny latabatra - ahoana no hisorohana ny hadisoana amin'ny fitomboany?
Ahoana no mitombo ny voanjo?
Fambolena fambolena sy fiahiana
Badan - fambolena sy fiahiana
Blaogin'ny gazo - fambolena sy fiahiana
Hoeing ny ovy
Ahoana no hambolena kakazo?
Verbena - mitombo amin'ny voa, rehefa nambolena tamin'ny zana-ketsa, karazana fiahiana
Fanatanjahantena ho an'ny fampandrosoana ny fisainana
Akanjo hoditra marevaka
Street Fashion - Fall 2015
Ahoana no fomba hanamboaran-jazakely fanariam-pako ao anaty lafaoro?
Protokolo Long eco amin'ny andro - scheme
Beyoncé dia nitazona bikini iray tamin'ny andro voalohan'ny fahaterahana
Fotsy fotsy - amin'ny akanjo sy ny fomba famoronana tsipìka kanto?
Inona no tsy vita rehefa vita ny fanasan'ny Tompo?
Misaotra anao, velona: TOP-20 maty indrindra
Ashley Graham dia nahagaga ny mpankafy azy tamin'ny sary mamirapiratra sy "marina", mitifitra ny "Rescuers Malibu"
Ageratum - fambolena sy fiahiana
Mangiran-dratsy amin'ny vehivavy
Sarafan-tsakafo maoderina - ny lamaody indrindra, tsara tarehy ary tsara tarehy amin'ny fahavaratra
Tapakila misy ranom-boasary: ​​tombom-barotra
Murom - toetrandro
Ahoana no hametrahana ny maha-ray aman-dreny amin'ny fomba an-tsitrapo sy tsy maintsy atao?
Fitsipika momba ny fanao amin'ny fanamiana